I-Strathmore Garden Pad - I-Airbnb
I-Strathmore Garden Pad
Itholakala imizuzu engu-3 uhamba ngezinyawo ukusuka ogwini, leli fulethi elikhanyayo, elikhanyayo nelinomoya ongu-1 liyinhlanganisela ephelele yentokozo eseceleni kolwandle kanye nokunethezeka kwemakethe. Kunompheme oholela ku-sundeck enwetshiwe, iminyango eshelelayo endaweni yokuhlala namafasitela amakhulu e-bay ekamelweni lokulala, leli fulethi ligcwele ukukhanya kwemvelo nomoya omusha. Imataniswe nobuhle obungathathi hlangothi, indawo yokuhlala yepulani evulekile, amaphethelo amnandi nezinto zikagesi ezikahle, ukuzinza eholidini lakho lolwandle kulula uma uhlala lapha.
Ukubuka okumangalisayo kolwandle nolwandle. 3 Amaminithi uhamba ngezinyawo ukuya ebhishi laseCamps Bay. Idekhi yangasese enezihlalo, nemicamelo yegumbi lokuphumula elangeni.
5.0 · 107 okushiwo abanye
IStrathmore Road iwumgwaqo ofunwa kakhulu eCamps Bay. Lokhu kungase kubalulwe ngokwengxenye ukubukwa kwentaba enkulu nolwandle okunikezwayo kuwo wonke amazinga. Okunye okunomthelela wukufinyelela kalula komgwaqo ohlinzeka abahlali endaweni engaphambi kolwandle, izindawo zokudlela, amabha kanye nezitolo ezilula. Siyayithanda i-Firefly, ukuhamba ngokushesha imizuzu eyi-15. Hamba uye ku-tidal pool ukuze ubhukude bese ujabulele enye yekhofi yabo edumile nama-croissant combos.
Ngihlala esizeni futhi ngiyatholakala ukuze ngisize ngezincomo, ukuqonda kwendawo kanye nemibuzo ongase ube nayo. Umgcini wendlu wami osendaweni uzongena ukuze avuselele indawo yakho njalo ezinsukwini ezimbalwa futhi unolwazi kakhulu, unobungane futhi ujabule ukukusiza.
Ngihlala esizeni futhi ngiyatholakala ukuze ngisize ngezincomo, ukuqonda kwendawo kanye nemibuzo ongase ube nayo. Umgcini wendlu wami osendaweni uzongena ukuze avuselele indawo yak…